Ukuhlolwa kwe-EPA kwamakhemikhali kudonsa ukugxekwa kososayensi bayo - i-US Right to Know
Posted on February 24, 2021 by UCarey Gillam
Ososayensi abaningi baseMelika abasebenzela i-Environmental Protection Agency (EPA) bathi ababethembi abaholi abaphezulu balesi sikhungo ukuthi bazothembeka futhi bayesaba ukuziphindiselela uma bezobika ukwephulwa komthetho, ngokocwaningo lwabasebenzi olwenziwe ngo-2020.
Ngokusho the I-Federal Employee Viewpoint Survey yango-2020, okwenziwe yi-US Office of Personnel Management, amaphesenti angama-75 abasebenzi be-EPA ophikweni lweNational Program Chemicals Division abaphendule kulolu cwaningo bakhombisa ukuthi abacabangi ukuthi ubuholi obuphezulu bale nhlangano bugcine “amazinga aphezulu okuthembeka nobuqotho.” Amaphesenti angamashumi ayisithupha nanhlanu abasebenzi abaphendula oPhikweni Lokuhlola Ubungozi baphendule ngendlela efanayo.
Okushaqisayo futhi, amaphesenti angama-53 abaphenduli ophikweni lwe-EPA's Risk Assessment Division athe abakwazi ukudalula ukusolwa kokwephula umthetho noma umthethonqubo ngaphandle kokwesaba ukujeziswa. Amaphesenti angamashumi amane nantathu abaphendula abasebenzi be-EPA e-Office of Pollution Prevention and Toxics (OPPT) baphendule ngendlela efanayo.
Imizwa engemihle ekhonjiswe emiphumeleni yocwaningo ihambisana nemibiko ekhulayo yokungalungi ngaphakathi kwezinhlelo zokuhlolwa kwamakhemikhali ze-EPA, ngokusho kwePublic Employees for Environmental Responsibility (PEER).
"Kufanele kube nokukhathazeka okukhulu ukuthi ngaphezu kwengxenye yamakhemikhali e-EPA kanye nabanye ochwepheshe abasebenza ngezinkinga ezibalulekile zezempilo yomphakathi abazizwa bekhululekile ukubika izinkinga noma ukwephulwa kwefulegi," kusho uMqondisi Omkhulu we-PEER uTim Whitehouse, owayengummeli we-EPA. isitatimende.
Ekuqaleni kwale nyanga, iNational Academies of Sciences, Engineering, and Medicine kusho i-EPAImikhuba yokuhlola ubungozi ngaphakathi kohlaka loMthetho Wokulawulwa Kwezinto Eziyingozi "ibiphansi kakhulu."
"Ubuholi obusha be-EPA buzosebenza ngokugcwele ekulungiseni lo mkhumbi ocwilayo," kusho uWhitehouse.
Ngemuva kokuthatha izintambo ngoJanuwari, uMongameli uJoe Biden wakhipha umyalelo omkhulu wokuthi i-EPA ngaphansi kweBiden ingaphambukela esimweni sayo kumakhemikhali amaningana ezinqumweni ezenziwa yile nhlangano ngaphansi kukamongameli wangaphambilini uDonald Trump.
In izincwadi yangomhla kaJanuwari 21, i-EPA Office of General Counsell yathi okulandelayo:
“Ngokuhambisana ne-Executive Order kaMongameli Biden Yokuvikela Impilo Yomphakathi kanye Nezemvelo kanye Nokubuyisela Isayensi Ukubhekana Nesimo Sezulu esikhishwe ngoJanuwari 20, 2021, (Health and Environment EO), lokhu kuzoqinisekisa isicelo sami egameni le-US Environmental Protection Agency ( EPA) ukuthi uMnyango Wezobulungiswa wase-US (i-DOJ) ufune futhi uthole ama-abeyance noma ukuhlala kwezinqubo zamacala okulindelwe enkantolo afuna ukubuyekezwa kokwahlulela kwanoma imuphi umthethonqubo we-EPA owakhishwa phakathi kukaJanuwari 20, 2017, noJanuwari 20, 2021, noma ufuna ukusungula umnqamulajuqu we-EPA ukumemezela umthethonqubo maqondana nesihloko sanoma yikuphi okunjalo
izibulala-zinambuzane imvelo, EPA, Ukudla, zezempilo, UNTANGA, izibulala-zinambuzane, umthethonqubo, isayensi